トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Kuti uone kana muenzaniso kuhwina kubva nepachinko muchina uchishandisa mamiriro
Models kukurumbira pakati nepachinko, hapana muenzaniso. Zviri pachena, asi chii yakawanda vatengi kuti muenzaniso Popular vanogara. Saka, achangopera kuoneka paakapinda nepachinko chitoro, ndinofunga kuti ndiyo nzira muenzaniso mutengi ane yakawanda agere. Shop rose uchishandisa mamiriro ezvinhu, asi achizosiyana pedyo payout uye pfungwa yose chitoro, inoti zvimwechete pamusoro muenzaniso-chaiyo anodawo mamiriro ari muzvitoro. Achitaura
tichishandisa vatengi kunamatira zvakanaka yokutevedzera, asi ndiye Xintai, Xintai ari pane zvinhu zvakawanda kuti vakaitwa pakupora nguva.
Xintai ndiko, nekuti zviri pachena kune tsime nevakawanda kumhanya, vakatsauswa mukushanda Xintai, ndinofunga kuti zvingasakwaniswa, tapota cherechedza kuti dzimwe nguva kupiswa kana nokugara wakaramba.
zvakare, uye kunze billboard yokutevedzera mudanga rezvipfuwo nenzira, akadai kuvaraidza achidzokorora vatengi kana apora, I kazhinji nepachinko parlors kuti vari kushanda.
Zvisinei, panewo nepachinko yokumusoro haufaniri shoma kusaina yokutevedzera. Achitaura chii chiri kuitika Ndokusaka ezvinhu akadaro, nokuti mwero nokupora muna billboard womuenzaniso hahusvikirwi. Nepachinko yokumusoro mudzimu muenzaniso hakuna chakanaka kufunga kuti billboard yokutevedzera, isu mwero kazhinji kuzoita yose chitoro kuri kumusoro.
Naizvozvo, kutanga kupinda muchitoro, kuona kushanda billboard yokutevedzera, chokwadi ndechokuti, zvokuti rinokosha chaizvo. Uyezve, pane nyaya apo pane run pamusoro womuenzaniso, akadai paiva Xintai uye vaimbova popularity shomanana apfuura. Pakadaro, kana zvave zviri chiitiko muenzaniso, asi quasi-Xintai uye zita kuzivikanwa kuti vawira imomo, muzita chacho, dzakadai nokushanda kumusoro ikoko mhando kushanda kuvariritira kuti haachashandi mari ikozvino, kusvika chipikiri unogona kugadziridzwa. Kana paine run pamusoro womuenzaniso, akadai akamutswa kuti
rwendo, zvingava zviripo kugara. Kushanda mamiriro
yokutevedzera, zvingataurwa kuti zvakakosha Zvisinei kutsvaka yokutevedzera kuti chinangwa, kuti zvimwe zviitiko pachena kana ari kumhanya imomo sezvo Xintai zvisizvo, kuburikidza Good nepachinko yokumusoro hwokushanda kubva munhuwo kana zvakadaro, irege kuva sezvo Kunyanya zviitiko, nezvimwewo, muenzaniso unoda kutsikwa kana iwe kana akanga Mitsurudai, kuti zvibudire nokuridza nevamwe yokutevedzera, ari chitoro chakaipa iro kubata uchishandisa mamiriro, unofanira Sankounisuru.
nekuti pane zvinhu zvakawanda kuti hazvigoni akati kuti pane nevakawanda nokuti mirawo pane kuvhiyiwa, ndinofunga hazvisi ngozi kusarudza chinangwa iri chete run.
chipikiri kuchinja uye nokurondedzerwa, sezvinoonekwa kubva data, uye kufanana nenzira dzakasiyana, kana nokuti zvechokwadi kubudiswa kumhanya zvakanaka, akarurama kana tenga yose kushanda kuti chete mukuru nokugaramo nokuda zvakanaka, ndiko kuona kusvika.
chaiko kuona zvakanaka zvitoro zviri uchishandisa mamiriro nezvimwewo, edza kushandisa sezvo zvinobudirira ruzivo ndiko uchishandisa mamiriro muenzaniso. Vatengi reMovement, kuchavawo vanonzwa muchitoro yevanhu. Nokuongorora muenzaniso oparesheni, ine nyaya kuuya anoratidzawo akadai mamwe zvitoro kuti tsika.